Outlook Express Gadzira Chishandiso. Outlook Express Gadzirisa Software.
DataNumen Outlook Express Repair ndiyo yakanakisisa Outlook Express kugadzirisa uye kugadzirisa chishandiso pasi. Inogona kugadzirisa yakaora Outlook Express DBX uye MBX mafaera uye dzoreredza yakawanda yako maemail sezvinobvira, nokudaro uchideredza kurasikirwa mufaira uori.
Cherechedza: Ndapota shandisa DataNumen Outlook Repair kudzoreredza maemail uye zvimwe zvinhu kubva kune yakashata Outlook PST mafaera.
4.90 / 5 (kubva 1,455 mavhoti)
Sei DataNumen Outlook Express Repair?
Kudzoreredza mwero ndiyo most kukosha kwakakosha kweiyo Outlook Express data kupora chigadzirwa. Zvinoenderana nemiedzo yedu yakazara, DataNumen Outlook Express Repair ine yakanakisa kupora mwero, zvirinani kupfuura chero vamwe vakwikwidzi mumusika!
Dzidza zvakawanda nezvekuti sei DataNumen Outlook Express Repair inoputa kukwikwidza
Ndinokukwazisai nekuda kweDOER yenyu inova yega software yandakaedza inogona kudzoreredza chero yangu yakaipa dbx
Kutenda kwakawanda nekuita yako demo vhezheni iwanikwe kune vanhu vakadaro
seva pensioners (wandiri mumwe wavo).
Shanduro yeRusununguko uye kusimudzira webhusaiti
Carletonville, Chamhembe Afrika
Chekupedzisira - chigadzirwa chinoita zvarinotaura nenzira yakatwasuka isina maturo uye inoshamisa mhedzisiro. Kuita zvakanaka! Ndinoshuva dai ndawana chigadzirwa chako kare
Chekupedzisira - chigadzirwa chinoita zvarinotaura nenzira yakatwasuka isina maturo uye inoshamisa mhedzisiro. Kuita zvakanaka! Ndinoshuva dai ndawana chigadzirwa chako ndisati ndatambisa mari yangu pane vakawanda vanonyepedzera kunze uko.
Yangu yekudzoreredza kuedza neDERER ikozvino 100%.
NDATENDA! Kugadziridzwa uye kuchengetwa pane flash drive ndisati ndarasa IE uye OE !!!
zvakanaka ndinoifarira uye ndinofunga ndichaitenga
Mukadzi wangu akaita zvese.
Nekutenda ndanga ndiine ese ma dbx mafaera kuseri-kumusoro kubva munaNovember 19 uye mamwe ese aive
Nekutenda ndanga ndiine ese ma dbx mafaera kuseri-kumusoro kubva muna Mbudzi 19 uye mamwe ese akange achiri paemail server, saka kana ndangogadziriswa, ndakadhonza makumi mapfumbamwe emaemail, asi zvaive zvese ipapo.
Zviri nyore kukoshesa makumi mashanu emadhora.
Ini ndichangotenga uye ndoshandisa DOER kudzoreredza imwe yemushandisi yangu .dbx mafaera aive pamusoro pe2GB. Yakashanda zvikuru - ndatenda nechigadzirwa chinobatsira kwazvo.
Ndanga ndichitambura kuti ndiwanezve makore mana e-mail kubva kune yangu yakadonha hard drive kwevhiki rapfuura kana zvakadaro.
Takashandisa iyo demo vhezheni yeDERER -
Ndakashandisa iyo demo vhezheni yeDERER - haina kuita izere vhezheni kururamisira !! Iyo yakazara vhezheni yakadzoreredza 100% yetsamba dzangu - chakanakisa chidimbu che software - mutengo wakakura zvakare.
Ndatenda, ndozvakashanda. Chigadzirwa chikuru - zvechokwadi muponesi weupenyu!
Ndakatenga DataNumen Outlook Express Repair uye nekubudirira kudzoreredza mafaera mufaira rangu iro neimwe nzira rakanyangarika kubva pane yangu OE runyorwa. Wako
Ndakatenga DataNumen Outlook Express Repair uye nekubudirira kudzoreredza mafaera mufaira rangu iro neimwe nzira rakanyangarika kubva pane yangu OE runyorwa. Chigadzirwa chako chakashanda zvakanaka; waita hako.
Software yako yakandibatsira zvakanyanya, ndatenda thanks thanks thanks zvakanyanya !!!!!!!!!!
Ndatenda nematauriro ako.
Une chigadzirwa chakanakisa, chakandidzorera mafaira mazhinji.
Mutungamiri Express Accounting Solutions
Ndatenga nhasi yako Advanced Outlook Express Repair - Makorokoto, yakashanda zvinoshamisa!
Zvimwe pane zvimwe zvinhu zvidiki,
Zvimwe kunze kwezvimwe zvinhu zvidiki, senge shimering danda panguva yekudzosa basa, kana, kurongedzwa kwezviri mukati meInbox dbx faira mumafaira maviri ane iyo yakafanana nguva yenguva e-mail. Ehe, ndakabvunza software kuti igadzire imwe faira ine mae-mail akadzorerwa mushure mekuwanazve 2 mae-mail, asi, ini ndaitarisira kuwana mafaera maviri anobudirira maererano nemazuva eemail, uye kwete zviitiko zvinoshamisa zvemafaira maviri ane nguva imwecheteyo yenguva maemail!
Asi, sezvandakambotaura, izvi zvinhu zvidiki, uye pamusoro pezvose, ndinodada nebasa rakaitwa ne software yako, uye zvechokwadi, ndiri kuzorikurudzira kushamwari.
Ini ndinoshuvira iwe yakawanda yekubudirira mukugadzira & kugadzira zvirongwa zvakadaro!
Ndatenda zvikuru, Pachokwadi,
Yigal YeMweya Nhungamiro
Ndatenda nemhinduro yako - farira rubatsiro rwako.
Chaizvoizvo, ndakatenga AOER nezuro, uye ese lost maemail akawanikwa !!
AOER inoita kunge iri kushanda zvakanaka, uye inofanirwa kugadzirisa matambudziko angu ese eEE!
Ini ndaive ne lost maemail akakosha panguva yekubatana uye aisaziva kuti ungaawana sei kana kuvhurazve. Chigadzirwa chako chakagadzirisa kuburitswa
Ini ndaive ne lost maemail akakosha panguva yekuita compacting uye aisaziva kuti ungaawana sei kana kuvhurazve. Chigadzirwa chako chakagadzirisa kuburitswa (pakupedzisira).
Nekudaro, iwe unofanirwa kutsanangudza kune maLudites seni kuti chero maAK BAK anogona kutumidzwa zita rekuti DBX. Iyo most faira risingadiwe randaida rakatumidzwa zita rekuti BAK (iro randinonzwisisa kuti rinogona kunge rakaitika mukuenzanisa) uye zvakanditorera zuva rekutsvaga kuti ndigone kuchinja zita refaira ndobva ndashandisa chigadzirwa chako kuita zvimwe zvese. Pane imwe nguva ini zvandakashanda izvo zvakashanda sekurapa!
Zvinhu Zvikuru mu DataNumen Outlook Express Repair v2.5
Kutsigira kuti uwanezve Outlook Express 4 mbx mafaera uye Outlook Express 5/6 dbx mafaera.
Tsigiro yekudzosera dbx mafaera uye mbx mafaera pane yakashatiswa midhiya, senge floppy disks, Zip disks, CDROMs, nezvimwe.
Tsigiro yekugadzirisa batch yefaira dbx uye mbx mafaera.
Tsigiro yekugadzirisa dbx uye mbx mafaera anosvika 4GB, saka inogona kugadzirisa dbx mafaera nedambudziko re2GB.
Kutsigira kuti uwanezve Outlook Express data kubva temporary .dbt mafaera.
Tsigiro yekutsvaga uye kusarudza iyo dbx kana mbx mafaera kuti agadziriswe pakombuta yemuno.
Tsigira kusangana neWindows Explorer, kuti ugone kugadzirisa dbx faira nemenu yemamiriro eWindows Explorer zviri nyore.
Tsigiro yekuraira mutsara (DOS Prompt) parameter, kuti ugone kukumbira DOER kubva kuchirongwa chako.
kushandisa DataNumen Outlook Express Repair Kupora Outlook Express MaEmail
Outlook Express inochengeta ese emaimeri mu .dbx mafaera. Semuenzaniso, iyo Inbox.dbx faira ine maemail muInbox, iyo Outbox.dbx faira ine maemail muInbox, zvichingodaro.
Kana iyo .dbx faira yakaora uye usingakwanise kuwana maemail mairi, unogona kushandisa DataNumen Outlook Express Repair kudzorera maemail ako kubva pairi. Iwo maemail akadzorerwa anochengetwa se .eml mafaera ayo anogona kuunzwa zviri nyore kudzokera ku Outlook Express.
Tsvaga iyo yakaipa .dbx kana .mbx faira kugadziriswa kana usati waita zvakadaro.
Cherechedza: Usati wagadzirisa iyo yakaipa dbx kana mbx faira ne DataNumen Outlook Express Repair, ndapota vharai Outlook Express uye chero mamwe maapplication anogona kushandura iyo faira.
Sarudza iyo yakaipa dbx kana mbx faira kuti igadziriswe:
Unogona kuisa iyo dbx kana mbx filename zvakananga kana tinya iyo bhatani rekutarisa uye sarudza iyo faira. Iwe unogona zvakare kudzvanya iyo bhatani kuti uwane iyo dbx kana mbx faira kuti igadziriswe pakombuta yemuno.
By default, DataNumen Outlook Express Repair ichaburitsa meseji dzakadzorerwa mune dhairekitori xxxx_recovered, uko xxxx izita reiyo yakaipa dbx kana mbx faira Semuenzaniso, yefaira Inbox.dbx, iyo default kuburitsa dhairekitori ichave Inbox_recovered. Kana iwe uchida kushandisa imwe dhairekitori, ndokumbira usarudze zvinoenderana:
Click bhatani, DataNumen Outlook Express Repair kuda start kudzoreredza tsamba kubva kune yakashata dbx kana mbx faira. Kufambira mberi kubhawa
Mushure mekugadzirisa maitiro, kana paine mameseji akawanikwa kubva kuiyo dbx kana mbx faira zvakabudirira, iwe uchaona bhokisi remeseji seiyi:
DataNumen Outlook Express Repair 2.5 inoburitswa muna Zvita 24, 2020
DataNumen Outlook Express Repair 2.3 inoburitswa munaNovember 9th, 2020
DataNumen Outlook Express Repair 2.2 yakaburitswa munaGunyana 28, 2013
DataNumen Outlook Express Repair 2.1 yakaburitswa muna Chikunguru 7, 2009
DataNumen Outlook Express Repair 2.0 yakaburitswa muna Ndira 29, 2009
DataNumen Outlook Express Repair 1.5 yakaburitswa muna Zvita 6, 2006